Somaliland oo mamnuucday duulimaadyada UN-ka - BBC Somali - Warar
Somaliland oo mamnuucday duulimaadyada UN-ka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 Mey, 2013, 18:40 GMT 21:40 SGA
Wasiirka Duulista Hawada iyo Gaadiidka cirka Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa soo saartay amar ay ku joojineyso duulimaadyada Qaramada Midoobay ee Somaliland.
Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka cirka Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa soo saartay amar ay ku joojineyso berrito arbacada laga bilaabo dhammaan duulimaadyadii qaramada midoobay ee tagi jiray ama ka duuli jiray gegooyinka dayuuradaha ee somaliland.
Wuxuu sheegay in ay tallaabadan u qaateen kadib markii buu yiri dawladda somaliya ay sheegatay in ay la wareegtay maamulka hawada Soomaaliya oo ay ku jirto somaliland.
Wuxuu ku eedeeyay Qaramada midoobay hay'adeeda ICAO oo dhex u maamuleysay hawada Soomaaliya iyo Somaliland ay la safatay Soomaliya.
Wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sheegay in xukuumada Somaliland iyadoo keli ahi bixin karto ruqsadaha dayuuradaha isticmaalaya gegooyinka iyo hawada somaliland.
Weriyaha BBC ee Hargeysa Axmed Saciid Cige oo wasiirka maxamuud Xaashi cabdi wareystay ayaa ugu horreyn weydiiyay waxa ay tahay jawaabta ay ka bixinayaan?